Ogwe ntụ ọka, wiil ụkwụ aka, isi na - agba mmiri - ọla na injinia
Mgbapụta Parts ọzọ >>
anyị mgbapụta & valvụ Nkedo Parts ọnọ mba Europe dị ka OEM ma ọ bụ mgbe ahịa akụkụ n'ihi na ihe karịrị afọ 30 na-enweta aha ọma na ezi akara nke anọgidesi àgwà.
Ngwa akụrụngwa igwe ọzọ >>
Nkedo, machining, Metalworking, Mkpa Ọgwụgwọ, Okpomọkụ Ọgwụgwọ, Griding, igwe, Polishing, waya EDM, Linear Cutting wdg
Ugbo ala ọzọ >>
Ngwaahịa na-ọtụtụ-eji Vehicles Parts (Motor ， Car, Truck, Trailer wdg…),
Electtric Power Ngwa Parts ọzọ >>
Anyị na-enye ngwaahịa maka ndị nrụpụta akụrụngwa ike ụwa, gụnyere ngwa ngwa ike ọkụ ọkụ ọkụ eletrik, ngwa ọrụ akụrụngwa ike, wdg.
Akụkụ Valve ọzọ >>
Fire Fight equipments & mapụtara akụkụ ọzọ >>
Akpaka sprinkler usoro maka ọkụ nchedo na azụmahịa, obodo na ọchịchị rụrụ dị ka ịnye mmiri, gas kpọbata, okpomọkụ kpọbata, wdg
Akụkụ ịchọ mma ọzọ >>
M & E ornamental iron na ígwè mgbatị ma ọ bụ na-emepụta ngwaahịa na-mere nke elu àgwà ihe, mepụtara ma site na omenala ọrụ usoro na-efu ụzọ nke nwere ike obi sie anyị na-Nlụpụta nnukwu ọnụ ọgụgụ nke n'elu mma, mara mma e mere mmiri na ndị ahịa anyị chọrọ.
Scaffolding Nkedo, ibe ya bụrụ ọzọ >>
Anyị bụ ndị a ọkachamara emeputa na soplaya nke scaffolding akụkụ na-mbupụ ụlọ ọrụ na ibe ya bụrụ, mgbatị, punching, oyi akpụ na elu ọgwụgwọ akara-dị ka na-ekpo ọkụ itinye galvanization, zinc plating na ntụ ntụ mkpuchi wdg.
E guzobere Hebei Metals & Engineering Products Company Ltd. na 1974 ma wezigharị ya site na ụlọ ọrụ nke steeti gaa na nkeonwe ya na 2005.
Anyị bụ ndị ọsụ ụzọ nke oge ọgbụgba ekspootu na Hebei Province, China.
Site na ndi nile nwere 2 ma nwekwaa ndi ha na ha na enye nkwado oge ha na egbo mkpa ndi ahia di iche iche maka imeputa ihe (na ihe di iche iche na usoro ihe nkedo), ịkpụzi na mkpuchi elu wdg. , anyị nyekwara ọzọ 20 nde RMB upgrading na foundry ụlọ ọrụ.
lastes ozi ọma
M&E dị mpako ịkpọsa na anyị nwere akara niile nke ọkpọkọ na-enweghị mgbatị na ntinye dabara ...
Maka imepụta ihe na-eguzogide corrosion na mpaghara nke elu ikuku na kọntaktị na ...